News 18 Nepal || को बन्ला ‘कमेडी च्याम्पियन २’ को विजेता ? यस्तो छ मनोज गजुरेलको विश्लेषण
काठमाडौंँ । रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन २’ विजेता घोषणाको चरणमा पुगेको छ । आगामी २ असोजमा विजेता घोषणा हुने प्रतियोगिताको फाइनलमा ती प्रतियोगी भरतमणि पौडेल, सन्तोष थापा र विक्की अग्रवाल पुगेका छन् ।
तीनै प्रतियोगी आफूलाई विजेता तुल्याउन अहिले भोटिङ अभियानमा छन् । सबै प्रतियोगीका लागि नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले भोटका लागि अपिल गरिरहेका छन् । तीन मध्ये कतिले भरतमणि विजेता हुने बताइरहेका छन्, भने कतिपयको दाबी सन्तोष र विक्की मध्य एकले उपाधि जित्ने दाबी रहेको छ ।
विजेता घोषणा हुने दिन नजिकिँदै गर्दै तीन प्रतियोगीलाई सुरुदेखि नियाल्दै आएका निर्णायक मध्येका एक मनोज गजुरेलले भने सबै प्रतियोगीको विशेषताबारे चर्चा गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा ‘कमेडी च्याम्पियनका ‘उत्कृष्ट तीन’को गजुरेल विश्लेषण !’ भन्दै एक पोष्ट गरेका छन् । जसमा फाइनलमा पुगेका तीन प्रतियोगीको विशेषता र उनले शोमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तुतिको चर्चा गरिएको छ ।
यस्तो छ गजुरेलको स्टाटस
सन्तोस थापाका सेटमा ‘रियल लाईफ एक्सपेरियन्स’, ‘अर्गयानिक कन्टेन्ट’, हाउभाउको सही प्रयोग र प्रस्तुतीमा शालिनता र सरलता भेटिन्छ । कमेडी च्याम्पियनको फाईनल ईपिसोडसम्म आईपुग्दा ‘टप थ्री’का केही अविस्मरणीय प्रस्तुतीहरु कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन ।
विकी अग्रवालको ‘यहाँनीर दुख्छ हो’, ‘एयर होस्टेज–बस कन्डक्टर’, ‘हरिमाया भाउजू’, ‘फिल्म डाईरेक्टर’, ‘रावणको पुनर्जन्म’, ‘पेन्टोमाईम’ लगायतका प्रस्तुतीहरु सम्झन लायक छन् । भरतमणीका ‘घरबेटी र डेराबाल’, ‘डाक्टर साहेब’, ‘जेष्ठ नागरिक दुःख’, ‘पत्रकारको कथा’, ‘पुर्व युबराज पारसको क्यारिकेचर’ लगायतका प्रस्तुतीहरु दर्शकका मनमा बसि रहनेछ्न ।
एमसीसी बारे घुमाउरो शैलीमा यसो भन्छन् राजेश हमाल
नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत निशा घिमिरेको निधन
निशा घिमिरेको कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ? यसो भन्छ नर्भिक अस्पताल
दीपाको जन्मदिनमा दीपकले खोले ३० वर्ष अगाडिको रहस्य